မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ/ဆရာမများ အစည်းအရုံး B.M.T.A ၏ အရေးပေါ် တောင်းဆိုကြေငြာချက်	Posted on July 18, 2011	by bmta05 B.M.T.A သည် ရွှေ့ပြောင်းဒေသရှိ ဆရာ/ဆရာမ ၇၀၀ ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဆရာ/ဆရာမများ၏ အစည်း အရုံးဖြစ်ပါသည်။ B.M.T.A ၏ အလုပ်အမှုဆောင်များသည်လည်း အဖွဲ့ဝင် ဆရာ/ဆရာမ များ၏ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းတကျ မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ပြီး ဆရာ/ဆရာမများကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲ ထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှ ပေးအပ်သော တာဝန်များအရ ဆရာ/ဆရာမများ၏ အကျိုးအတွက် ရှေးရှုဆောင် ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
This entry was posted in ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်, Burmese pages only. Bookmark the permalink.	← ရှေ့ဆက်ရမည့်လမ်း ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် သိပ္ပံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်